War aysan ku farxin Taageerayaasha AC Milan oo la shaaciyey? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
War aysan ku farxin Taageerayaasha AC Milan oo la shaaciyey?
Published on September 6, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(06-09-2017) Kooxda kubada Cagta AC Milan ayaa shaacisay dhaawac soo gaaray Cayaaryaahnkeeda daafaca ka dheela ee Andrea Conti kaas oo ay sheegeen in uu Garoomada ka maqnaan doono ugu mudo 20 maalmood ah.
Andrea Conti oo Xiligaan ku soo biirey kooxda AC Milan ayaa dhaawac ka soo Gaaray kulankii isreeb reebka koobka aduunka ee dalkiisu lacayaaray Xalay Israel iyada oo labadalay daqiiqadii 49 aad ee Cayaarta markii uu soo gaaray dhaawac.
Xiddigaan oo muhiim ka ahaa kooxda AC Milan ayaa seegi doona kulamada (Lazio, Udinese, SPAL, iyo Sampdoria) Waxaana taasi ay dhibaato ku noqon karaysaa Naadigaan oo Xiligaan doonaya in uu u dagaalamo Horyaalka.